Qalabka wax qabad iyo dahaarka: sifooyinka iyo guryaha | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 12/04/2022 12:00 | Tababar
ka agabka dhaqdhaqaajinta iyo dahaadhka waxaa loo kala saaray hab dhaqankooda xagga korontada. Waxaa jira kuwa awood u leh inay qabtaan koronto iyo kuwo kale oo, liddi ku ah, aan sidaas samayn karin. Qalabkani waxay leeyihiin astaamo kala duwan waxaana loo adeegsadaa qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo guriga.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qalabka korantada iyo dahaarka iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa loogu talagalay.
1 Agabka wax qabad iyo dahaarka
2 Waa maxay qalabka wax-qabadka?
3 Waa maxay qalabka semiconductor?
4 Waa maxay agab dhaqan wanaagsan?
5 Waa maxay walxaha dahaadhka ah
6 Tusaalooyinka Qalabka Wax-qabadka iyo Dahaarka
Qalabka waxa loo qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: kirishbooyada iyo insulators. Way fiicnaan lahayd in lagu qeexo inay yihiin kirishbooyada wanaagsan iyo kuwa xun, iyadoo ku xiran haddii shay kasta uu fududeeyo ama carqaladeeyo wadista. Qaybtani waxay saamaysaa laxadhka kulaylka (ie wareejinta kulaylka) ama korantada (ie socodka hadda).
In walaxda korontadu qabato iyo in kale waxay ku xidhan tahay fududaanta ay elektaroonnada ku dhex mari karaan. Proton-yadu ma dhaqaaqaan sababtoo ah, inkasta oo ay wataan koronto, waxay ku xidhaan borotoonnada iyo neutron-yada kale ee nukleus. Electrons-ka Valence waa sida xiddigaha ku wareegaya exoplanets. Waxay soo jiitaan ku filan si ay u sii joogaan, laakiin Had iyo jeer ma qaadato tamar badan si meesha looga saaro.
Biruhu si sahal ah ayay u luminayaan oo ay u helaan elektaroonnada, si ay u xukumaan liiska kirishtaannada. Unugyada organic inta badan waa insulators, qayb ahaan sababtoo ah waxay isku hayaan bonds covalent (electrons caadiga ah), laakiin sidoo kale sababtoo ah curaarta hydrogen waxay caawisaa xasilinta molecules badan. Aalado badankoodu maaha kirishbooyo wanaagsan ama dahaariyeyaasha wanaagsan. Si fudud kuma shaqeeyaan koronto, laakiin tamar ku filan, electrons way dhaqaaqaan.
Walxaha dahaarka qaarkood ayaa laga helaa xaalad saafi ah, laakiin way dhaqmaan ama ka falceliyaan haddii lagu daro xaddi yar oo walxo kale ah ama haddii ay ku jiraan wasakh. Tusaale ahaan, ceramics-ku intooda badan waa dahaadhyo aad u fiican, laakiin haddii aad wax ka beddesho, waxaad heli kartaa kondhodhiyeyaasha sare. Biyaha saafiga ah waa insulator-ka, laakiin biyaha wasakhaysan ayaa si fiican u dhaqdhaqaajinaya, halka biyaha cusbada leh ee leh aions-free-free ay u dhaqmaan si fiican.
Waa maxay qalabka wax-qabadka?
Conductors waa walxaha u oggolaanaya elektaroonnada inay si xor ah ugu dhex qulqulaan qaybaha. Walxaha ka sameysan agabka dhaqdhaqaajinta waxay u oggolaanayaan in lacag lagu wareejiyo dhammaan dusha shayga. Haddii lacag lagu wareejiyo shay meel gaar ah, si degdeg ah ayaa loogu qaybiyaa dhammaan dusha shayga.
Qaybinta kharashku waa natiijada dhaqdhaqaaqa elektarooniga. Alaabta wax-ka-qabashada waxay u ogolaataa elektaroonnada in laga soo qaado hal qayb oo loo wareejiyo qayb kale sababtoo ah shay la soo dallacay ayaa had iyo jeer qaybin doona kharashkiisa ilaa inta guud ahaan xoogga wax-iska-caabbinta ee u dhexeeya electrons-ka xad-dhaafka ah la yareeyo. Sidan, haddii kirishbooyuhu uu la kulmo shay kale, kirishbooyuhu wuxuu xitaa u wareejin karaa kharashkiisa shaygaas.
Lacagta kala wareejinta shay waxay aad ugu dhowdahay inay dhacdo haddii shayga labaad uu ka samaysan yahay walxo korantada. Maareeyayaashu waxay ogolaadaan wareejinta kharashka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee elektarooniga.
Waa maxay qalabka semiconductor?
Qalabka korantada waxaa ka mid ah maaddooyin isku shaqo leh, laakiin sidoo kale u dhaqmi kara sida insulators, inkastoo tani ay ku xiran tahay dhowr arrimood. Qodobadan ayaa kala ah:
Qalabka semiconductor ee ugu badan ee la isticmaalo waa Silicon, germanium oo dhawaan uun baa baaruud la isticmaalay sida qalab semiconductor ah.
Waa maxay agab dhaqan wanaagsan?
Maaddadani waa mid soo jiidasho leh sababtoo ah waxay leedahay awoodda dabiiciga ah in maaddadu ay tahay inay qabato koronto, laakiin xaaladaha saxda ah, iyada oo aan lahayn iska caabin ama lumis tamar.
Guud ahaan, iska caabbinta kirishbooyada biraha ah waxay hoos u dhigtaa heerkulka hoos u dhaca. Marka heerkulka muhiimka ah la gaaro, caabbinta kondhomiyaha sare ayaa si aad ah hoos ugu dhacda, laakiin waxay hubisaa in tamarta gudaha ku jirta ay sii socoto, inkasta oo aan lahayn awood. Anshaxa sare ayaa la abuuray.
Waxay ku dhacdaa walxo kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan alaabo fudud sida tiin ama aluminium oo aan soo bandhigin caabbinta korantada, sidaas darteed ka hortagaya walxaha inay soo galaan domainkooda. Taas oo ah saamaynta Meissner, waxay u ogolaataa walxaha in la celiyo, iyada oo la ilaalinayo.
Waa maxay walxaha dahaadhka ah
Si ka duwan kirishbooyada, insulators waa maaddooyin ka hortagaya socodka bilaashka ah ee elektarooniga atamka ilaa atamka iyo ka molecule ilaa molecule. Haddii culeyska lagu wareejiyo go'doominta meel gaar ah, culeyska xad-dhaafka ah wuxuu ahaan doonaa meesha asalka ah ee rarka. Qaybaha dahaadhka ah ma ogola qulqulka elektaroonigga ah ee bilaashka ah, markaa kharashka ayaa si dhif ah loogu qaybiyaa dusha alaabta daaha.
Inkasta oo insulators aysan faa'iido u lahayn wareejinta kharashka, door muhiim ah ka ciyaara tijaabooyinka korantada iyo bandhigyada. Walxaha waxtarka leh ayaa badanaa lagu rakibaa walxaha dahaarka leh. Habayntan kirishbooyada ee ka sarreeya dahaarka waxay ka hortagtaa wareejinta kharashka shayga agagaarkeeda, iyada oo ka fogaanaysa shilalka sida wareegyada gaaban ama koronto. Habayntani waxa ay noo ogolanaysaa in aan ku dhaq-dhaqaaqno shayga korantada anagoon taaban.
Markaa waxaan dhihi karnaa in sheyga dahaadhka ahi uu u dhaqmo sidii gacan ku haynta kaari dusha miiska shaybaadhka mobilada. Tusaale ahaan, haddii soodhaha aluminium loo isticmaalo in lagu shubo tijaabooyinka, daasadaha waa in lagu dhejiyaa dusha koobka caagga ah. Muraayadu waxay u shaqeysaa sidii dahaye, ka hortagaya daasadaha soodhaha inay soo daadan.
Tusaalooyinka Qalabka Wax-qabadka iyo Dahaarka
Tusaalooyinka qalabka wax-ka-qabashada waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Tusaalooyinka walxaha dahaadhka ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
biyo saafi ah
Kala qaybinta alaabta ee qaybaha kirishbooyada iyo dahaadhiyeyaasha waa wax ka mid ah qaybinta macmal ah. Way ku habboon tahay in walxaha la dhigo meel ay weheliso sii socoshada.
Waa in la fahamsan yahay in dhammaan agabka korantada aanay lahayn koronto isku mid ah, oo dhammaan dahaariyeyaasha aysan si isku mid ah u adkaysan karin dhaqdhaqaaqa elektarooniga. Hab-dhaqanku waxa uu la mid yahay hufnaanta walxaha qaarkood ee iftiinka.: Walxaha si fudud "ku dhaafa" iftiinka waxaa loo yaqaan "transparent", halka kuwa aan si fudud u "ku gudbin" loo yaqaan "opaque". Si kastaba ha ahaatee, ma aha in dhammaan agabka daah-furnaanta leh ay leeyihiin isla socodka indhaha. Si la mid ah kirishbooyada, qaar ayaa ka fiican kuwa kale.
Kuwa leh korriin sare, oo loo yaqaanno superconductors, ayaa la dhigayaa hal cidhif oo walxaha korantada hoose ayaa la dhigayaa dhinaca kale. Sida aad kor ku arki karto, biraha waxaa la dhigi doonaa meel u dhow dhamaadka ugu dhaqsaha badan, halka galaaska waxaa la dhigi doonaa cidhifka kale ee joogtada ah. Daawashada biraha waxay noqon kartaa trillion trillion jeer ka muraayadda.
Heerkulka sidoo kale wuxuu saameeyaa dhaqdhaqaaqa. Marka heerkulku kordho, atamka iyo elektaroonnada ayaa helaya tamar. Insulators Qaar ka mid ah, sida muraayadaha, waa kirishbooyada liita marka qabow, laakiin weli wanaagsan kirishbooyada marka kulul. Inta badan biraha ayaa ah kirishbooyada ka fiican.. Waxay ogolaadaan qaboojinta iyo kirishbooyada ka sii xun marka ay kulul yihiin. Qaar ka mid ah kirishbooyada wanaagsan ayaa laga helay kontaroolada sare ee heerkulka aadka u hooseeya.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto qalabka wax lagu dhaqo iyo kuwa dahaadhka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Tababar » Agabka wax qabad iyo dahaarka